Pradeep karki, Author at उपयोगी info
Author: Pradeep karki
January 19, 2022 Pradeep karkiLeaveaComment on यस्ता स’मस्या भएको बेलामा कागती खानुभयमा , हुन सक्छ वि’ष सरह सतर्क रहनुहोला
हाम्रो घर वरीपरी र बजारमा कागती सजिलै पाइन्छ । स्वादमा अमिलो हुने कागतीमा प्रशस्त भिटामिन ‘सी’ पाइन्छ । यसको से’वन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फा’इदाजनक मानिन्छ । तर कुनै बेला कागती शरिरको लागि बे’फाइदा पनि हुन्छ । अ’म्लीय तत्व हुने कागतीको धेरै से’वन गरेमा वि’ष सरह पनि हुन सक्छ । त्यसैले कागती धेरै से’वन पनि गर्नुहुँदैन […]
January 19, 2022 Pradeep karkiLeaveaComment on मा-सुले भन्दा तीन गुणा प्रोटिन दिने यी ७ खानेकुराहरु, जुन स्वास्थका लागि निकै लाभदायि
अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार मा-सुबाट भन्दा ड्राइ फ्रुट्स तथा बीउबिजनबाट प्राप्त हुने प्रोटिन मुटुका लागि स्वस्थकर हुन्छ । मा-सुबाट प्राप्त हुने प्रोटिनले मुटु रोगको ख-तरा बढाउछ । जाे मानिस मा-सुजन्य प्रोटिन बढी उपभोग गर्छन् उनीहरूलाई मुटुरोगको ख-तरा ६० प्रतिशतसम्म बढेको पाइयो भने जाे ड्राइ फ्रुट्सजन्य प्रोटिन बढी सेवन गर्छन्, उनिहरुमा याे समस्या ४० प्रतिशतभन्दा […]
January 19, 2022 Pradeep karkiLeaveaComment on बिना अपरेशन र बिना अस्पताल गई,घरमै यसरी गर्नुहोस् पथ्थरीको उपचार ! यस्ता छन् घरेलु उपचार
मृगौला मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । मृगौलाको काम शरीरमा पानीको स्तर र अन्य तरल पदार्थ, केमिकल स्तर सही राख्नु र हानिककारक पदार्थ बाहिर निकाल्नु हो । हामीले जे खान्छौँ, त्यसले हाम्रो शरीरमा शक्ति प्रदान गर्छ। खानाबाट पाइने पोषक तत्वलाई शरीरको रगतसम्म पुर्याउने काम पनि मृगौलाले गर्ने गर्छ। तर कहिलेकाही गलत खानपानका कारण मृगौलालाई समस्या […]
January 19, 2022 Pradeep karkiLeaveaComment on को’रोना म’हामारीमा यी ५ खानेकुराले बढाउँछ रो’ग प्रतिरोधात्मक क्षम’ता
विश्वभर फैलिएको को’रोनाबाट बच्नका लागि रो’ग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन जरुरी छ । रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर भयो भने कुनै पनि रोगले छिट्टै आक्रमण गर्छ। रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो भयो भने कोरोना जस्ता भाइरससँग शरीरले सजिल्यै लड्न सक्छ। यसका लागि हाम्रो भान्सामा सजिल्यै उपलब्ध हुने विभिन्न खानेकुराहरूको बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ। पुदीना : यसको पातमा भिटामिन […]
January 19, 2022 Pradeep karkiLeaveaComment on तामाको भाँडोमा राखेको पानी पिउदा हुन्छन् यस्ता चमत्कारीक फाईदाहरु !
आजकल तामाको भाँडोको प्रयोग कम हुन थालेको छ । वृद्धहरूले तामाको भाँडोमा हालेर पानी पिएको देख्नुभएको होला । तामाको भाँडामा पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि धेरै लाभदायक हुने गर्छ जुन यस प्रकार छन्:- १) क्यान्सर कम:- शरीरमा भएका क-णले क्यान्सर कोशिकालाई विकसित गर्छन् । तामामा भएको शक्तिशाली एन्टीअक्सिडेन्ट गुणले यी कणहरूलाई समाप्त पारिदिन्छन् र शरीरमा तिनको […]
किन खाने रायोको साग ? यस्ता छन अचम्मका फाइदा सबैले जानी राखौं
January 19, 2022 Pradeep karkiLeaveaComment on किन खाने रायोको साग ? यस्ता छन अचम्मका फाइदा सबैले जानी राखौं
साग आफैंमा उपयोगी तरकारी हो । पकाएर र काँचै खान मिल्ने साग स्वादिलो पनि हुन्छ । त्यसमा पनि रायोको साग बहु उपयोगी हुन्छ । संसारभर पाइने अनकौँ तरकारीमध्ये दोस्रो बढी पोषणयुक्त तरकारीमा रायो पर्छ । तसर्थ, रायो स्वास्थ्यका दृष्टिले झनै लाभदायक छ । धेरै पकाउँदा भने यसमा रहेका पोषण तत्व नष्ट हुन सक्छ । यो […]
क’पाल झर्ने र टुक्रिने स’मस्याबाट सजिलै छुटकारा पाउन सकिन्छ यी सरल घरेलु उपायबाट !
January 19, 2022 Pradeep karkiLeaveaComment on क’पाल झर्ने र टुक्रिने स’मस्याबाट सजिलै छुटकारा पाउन सकिन्छ यी सरल घरेलु उपायबाट !
अहिलेको व्यस्त जीवनशैली र प्रदूषणको प्रभावले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ। जसका कारण कपाल झर्ने समस्या पनि अहिलेको आम समस्या जस्तै बनेको छ। अहिलेको मोडर्न लाइफ स्टाइलमा हामीले केमिकलयुक्त हेयर प्रोडक्ट्सको प्रयोग पनि गर्छौं । जसका कारण पनि कपाल झर्ने तथा टुक्रिने समस्या अधिक देखिने गरेको छ । आज हामी तपाईलाई कपाल झर्न […]
पेटमा ग्यास भरिने समस्या छ भने खानुहोस् यो बिरुवाको पात, १० मिनेटमै मिल्नेछ तपाईलाई राहत
January 19, 2022 Pradeep karkiLeaveaComment on पेटमा ग्यास भरिने समस्या छ भने खानुहोस् यो बिरुवाको पात, १० मिनेटमै मिल्नेछ तपाईलाई राहत
आजको समयमा गलत खानपानको कारण धेरै मानिसहरुलाई ग्यास सम्बन्धित समस्या हुने गर्दछ । आज हामी तपाईलाई यसैसँग सम्बन्धित कुराहरुको बारेमा जानकारी दिनै छौँ । एउटा यस्तो पात चबाउनुहोस् जसले १० मिनेटमा नै तपाईको पेटमा भएको ग्यासलाई तुरुन्त राहत दिनेछ र तपाईको यो समस्या पनि टाढा हुनेछ। पत्थरचट्टाको बिरुवा:- आयुर्वेदमा पत्थरचट्टालाई भष्मपथरी,पाषणभेद र पणपुट्टीस्को नामले पनि […]
January 19, 2022 Pradeep karkiLeaveaComment on यी घरेलु सामग्री प्रयोग गरी आफ्नो अनुहार सुन्दर बनाउनुहोस्
आफ्नो सौन्दर्य कायम राख्न जो कोहीलाई पनि चहाना हुन्छ । तर, कसरी भन्ने कुराको ज्ञान तपाई हामी सबैलाई नहसन सक्छ । यस्ता केहि उपाय बारे आज हार्मी चर्चा गर्दै छौ । सधैं केही श्रम गरिरहनु नै सौन्दर्य प्राप्तिको राम्रो उपाय हो । यसो भन्दैमा जतिबेला पनि बजारमा पाइने कस्मेटिक्स प्रोडक्ट प्रयोग गर्नु हुँदैैन । अनुहारको छालाको चमक […]
हरियो मकै मात्र हैन यसको जुँगा पनि हुन्छ फाइदाजनक, यी रोगका लागि हुन्छ रामवाण औषधि
January 19, 2022 Pradeep karkiLeaveaComment on हरियो मकै मात्र हैन यसको जुँगा पनि हुन्छ फाइदाजनक, यी रोगका लागि हुन्छ रामवाण औषधि
हरियो मकै पोलेर खानुको मज्ज्जा नै छुट्टै छ। तर यदि तपाईं मकै खाँदा त्यसको जुँगा फाल्नुहुन्छ भने अब यसो नगर्नुहोस्। मकै जुँगामा पनि धेरै पोषक तत्व समावेश हुन्छन्, जुन धेरै रोगको लागि लाभदायक हुन्छ। मकैको जुँगाको ड्रिंक्स बनाएर खाने हो भने यसले मिर्गौलालाई स्वस्थ राख्नुका सथै यसले थुप्रै रोगहरूबाट बचाउन मद्दत गर्छ। आउनुहोस् यो कुरा […]